Wụpụta pọtụfụ ego gị na-adabere na njirisi ndị ị weere dị mkpa. Họrọ pọtụfụụ ego gị dị ka mkpebi gị si dị: ịba ụba nke mbak, ụba ahịa nke ụlọ ọrụ, mkpụrụ ego dividend kwa afọ, akụkọ ego banyere uru, wdg.
Ọnụahịa ahịa biliri:
Debe nhọrọ nke ụlọ ọrụ ndị òkè ha bilitere na oge ahọrọ.
Dividend akwụ ụgwọ: *
Dividend - ụgwọ, na-agbakọ site na uru ụlọ ọrụ ahụ ma kwụọ ụgwọ site na mkpebi nke ụlọ ọrụ na-enwe nzukọ. Dividend na-egosiputa ego ịkwụ ụgwọ, mana enwere ike inye gị n'ụdị mbak ma ọ bụ ihe onwunwe ndị ọzọ.
Mba ma ọ bụ Ụlọ ahịa Exchange:
Debe ntanetị nke ụlọ ọrụ na mpaghara ma ọ bụ nzụkọ ahịa ebe ụlọ ahịa na-ere ahịa.
ebe ọ bụ:
ebe ọ bụ na izu gara aga
ebe ọ bụ na ọnwa gara aga
n'ime ọnwa atọ gara aga
kemgbe afọ gara aga
n'ime afọ atọ gara aga
otu ugboro n'afọ
kwa ọnwa isii
otu ugboro na nkeji iri na ise
ugboro ugboro ugboro 4 n'afọ
Site n'akụkụ ụwa nile Argentina Australia Austria Belgium Brazil Bulgaria Canada Chile China Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Europe Finland France Germany Greece Hong Kong Hungary India Indonesia Ireland Italy Izrel Japan Latvia Lithuania Luxembourg Macedonia Malaysia Mexico Morocco Netherlands New Zealand Norway Pakistan Philippines Poland Portugal Russia Singapore Slovenia South Africa South Korea Spain Sri Lanka Sweden Switzerland Taiwan Thailand Toro toro United Arab Emirates United Kingdom United States Venezuela Vietnam AMS (Amsterdam Exchange) ASE (NYSE Market (Amex)) ASX (Ahịa Ahịa Australia) ATH (Athens Stock Exchange) BCN (Azụmahịa Exchange Stock Exchange) BDP (Stock Exchange Exchange) BER (Berlin Exchange Exchange) BKK (Thailand Exchange Exchange) BMF (Brazil Mercantile & Futures Exchange) BRN (Berne eXchange) BRU (Euronext Brussels) BSE (Bombay Stock Exchange) BTS (Ebu Ahịa Ụwa) BUE (Buenos Aires Stock Exchange) BUL (Bulgarian Stock Exchange) BVC (Columbia Exchange Exchange (Bolsa de Valores de Columbia)) CBT (Chicago Board of Trade) CCS (Ego Exchange ahịa Caracas) CME (Chicago Mercantile Exchange) CNQ (CNQ) COL (Colombo Stock Exchange) CPH (Copenhagen Stock Exchange) CSC (Akara Futures US) CSE (Exchange Exchange Canada) CYP (Cyprus Stock Exchange) DME (Dubai Mercantile Exchange) DUB (Stock Exchange Ahịa) DUS (Dusseldorf Stock Exchange) ENX (Usoro Euronext) EUX (Eurex) FRA (Frankfurt Stock Exchange) FUK (Fukuoka Stock Exchange) GER (XETRA Stock Exchange) HAM (Hamburg) HAN (Hanover) HEL (Helsinki Stock Exchange) HKF (Hong Kong Futures Exchange) HKG (Ụlọ ahịa Exchange Hong Kong) HSX (HochiMinh Stock Exchange) ICE (Ice Futures Europe) IOB (Akwụkwọ Ezigbo Mba) ISE (Irish) IST (Istanbul Stock Exchange) JKT (Jakarta Stock Exchange) JSD (Exchange Exchange Securities) JSE (Johannesburg Stock Exchange) KDQ (KOSDAQ) KFE (Korea Futures Exchange (KOFEX)) KLS (Malaysia Exchange) KOE (KOSDAQ) KSA (Karachi) KSC (Korea Exchange Exchange) LBC (Casablanca Stock Exchange (Casablanca Bourse)) LIS (Euronext Lisbon) LJE (Ljubljana Stock Exchange) LSE (London Exchange Exchange) LUX (Ahịa Ahịa Luxembourg) MAC (Stock Exchange Makedonia) MCE (Madrid Stock Exchange (nwamba)) MCX (Moscow Exchange (MOEX)) MDE (Njikwa Ntugharị nke Malaysia) MEX (Ụlọ ahịa Exchange Mexico) MFM (Mercado Espanol de Futuros Financieros (MEFF)) MIL (Milan Stock Exchange / Borsa Italia) MSE (Ụlọ ahịa ahịa Montreal (Bourse de Montreal)) MUN (Munich) NAG (Nagoya Stock Exchange) NAS (NASDAQ) NCM (NASDAQ) NGM (NASDAQ) NJM (Hercules Stock Exchange) NMS (NASDAQ) NSE (National Stock Exchange nke India) NYM (New York Mercantile Exchange (NYMEX)) NYQ (NYSE) NYS (NYSE) NZE (New Exchange Stock Exchange) OBB (Market Market Bulletin OTC) OMX (Otu Chicago) OPR (OPRA) OSE (Osaka Securities Exchange) OSL (Oslo Bors) PAR (Euronext Paris) PCX (NYSE Arca) PHS (Ozi Exchange ahịa Philippine) PNK (Akwụkwọ mpịakọta Pink) PRG (Stock Exchange Exchange) RSE (OMX Baltic) SAF (South Africa Futures Exchange) SAO (BOVESPA - Sao Paolo Stock Exchange) SES (Exchange Singapore) SET (Stock Exchange nke Thailand) SFE (Ahịa Ahịa Ahịa Australia) SGO (Santiago Stock Exchange) SGX (Singapore Exchange Derivatives Clearing Ltd.) SHA (Shanghai Stock Exchange) SHE (Shenzhen Stock Exchange) SHH (Shanghai Stock Exchange) SHZ (Shenzhen) STO (Stock Exchange Stock Exchange) STU (Stuttgart Stock Exchange) TAI (Ụlọ ahịa ahịa Taiwan) TAL (OMX Baltic Exchange - Talinn) TLV (Tel Aviv Stock Exchange) TOR (Exchange Exchange Exchange) TSE (Stock Exchange Exchange) TWO (Taiwan OTC Exchange ) VAN (Exchange ahịa Exchange Toronto) VIE (Vienna Stock Exchange) VSE (OMX Baltic Exchange - Vilnius) VTX (SIX Swiss Exchange) WAR (Warsaw Stock Exchange) ZSE (Zagreb Stock Exchange)
Nhọrọ ndị ọzọ: *
Onu ogugu nke oma bu iweta ulo oru ndi bara uru dika akuko onu ogugu ohuru. Enweghị ụgwọ - iji weta ụlọ ọrụ na-enweghị ụgwọ na ụlọ akụ ma ọ bụ ala. Ụkpụrụ niile dị na dollar US - ụlọ ọrụ 'ụlọ ọrụ' na-ere ahịa na ego dị iche iche, maka nkwụsị nke njirịta, ụkpụrụ niile ga-agbanwe n'ime dollar US.
Onu ahia ego
Ụkpụrụ niile dị na USD
✔ 68166 mbak na-akwado njirisi
Kpaa site na:
Mmezi ego: *
Enweghị ike ịchọta data na akụ na ụba maka ụlọ ọrụ niile.
Ọnụ ego niile
R & D mmefu
Onu ogugu oke nkesa
Enweta uru ọ bụla
* Enweghị ike ịchọta data na akụ na ụba maka ụlọ ọrụ niile.
Gosi TOP 200 mbak
Ọnụ ahịa nke ụlọ ahịa. Ebee ka itinye ego ego? - otu n'ime ọrụ ntanetị kachasị mkpa saịtị ahụ allstockstoday.com
Ebe ị ga-etinye ego bụ ajụjụ kachasị mkpa maka ndị investors niile. O doro anya na ọ bara uru karị itinye ego na oke nke ụlọ ọrụ na-etolite mgbe niile na enweghị nsogbu n'ihe ọ bụla. A na-ekpebi uru nke itinye ego site na ego na usoro nke ịkwụ ụgwọ ego.
Ma e wezụga usoro ndị a doro anya, enwere ọtụtụ njiri mara ụlọ ọrụ na mgbanwe ngwaahịa nwere ike imetụta ajụjụ a: "Ebee itinye ego ego?".
Na ọrụ anyị maka ọnụahịa ụlọ ọrụ maka mgbanwe ngwaahịa ụwa, anyị na-eburu n'uche ihe ngosipụta ego nke ụlọ ọrụ:
Ọnụahịa ahịa ebiliwo
Mgbe a na-akwụ ndị na-akwụ ụgwọ ụgwọ
Companieslọ ọrụ nwere ezigbo net nha
Oge nke ịrị elu ahịa ụlọ ọrụ na mgbanwe ngwaahịa
Ọrụ ego nke ụlọ ọrụ - ego net
Ọrụ ego nke ụlọ ọrụ ahụ - akụ niile
Nrụ ọrụ ego - ego ha nwetara
Caplọ ọrụ ụlọ ọrụ
Onu ogugu nke ugwo
Ego n’iru n’iile
Ntinye aka na ntanetị site na uru nke itinye ego na-enye gị ohere inyocha ndepụta ụlọ ọrụ ngwaahịa site na oke ndị a.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịmepụta wijetị nke gị maka ụlọ ọrụ ọ bụla site na ọkwa anyị ka ị soro n'ịntanetị ma ọ bara uru itinye ego na ya.
Ozi na ọrụ “Ọnụ ahịa nke ụlọ ahịa. Ebee ka itinye ego ego?” ewepụtara site na isi mmalite ndị a pụrụ ịdabere na ya ma melite ya ozugbo.
Ọnụ ahịa ngwaahịa ọ buliela?
Ọnụ ahịa ngwaahịa ọ buliela? - mpaghara nzacha nke ọrụ anyị nke na-enye gị ohere ịmachi nhọrọ maka ụlọ ọrụ ndị òkè ha abawanyela na oge a kara aka.
Gosiputa na i nwere mmasi na ụlọ ọrụ ndi nwere oke, ị nwere ike ịdị oge a.
Ya mere, nzacha anyị “the nwe ọnụ ahịa nke mbak elu ọnụ” na-enye gị ohere ịhọrọ ụlọ ọrụ nke ọnụ ahịa ahịa abawanyela na oge a: site na izu gara aga, site na ọnwa gara aga, ọnwa atọ gara aga, site na afọ gara aga, afọ 3 gara aga.
Mgbe a na-akwụ ndị ahịa ụgwọ, nke a bụ otu okwu dị mkpa maka onye ọ bụla na-etinye ego.
Nkesa - ego nke ego egotara site na uru nke ụlọ ọrụ a wee kwụọ ụgwọ site na mkpebi nke nzukọ ndị nwe ụlọ ọrụ. Ihe ndi mmadu bu ndi mmadu na enweta ego ha.
Nyocha anyị na-enye gị ohere ịhọrọ ụlọ ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ ndị na-akwụghị ụgwọ.
Ndị na-akwụ ụgwọ nwere ike ịhọrọ oge mgbe ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ụtụ.
Ngosipụta nke ugwo site na ụlọ ọrụ azụmaahịa ụwa na-enye gị ohere ịhọrọ ụlọ ọrụ site ugboro ole ị na-akwụ ụgwọ: otu ugboro n'afọ, otu ugboro kwa ọnwa isii, otu oge n'ụzọ anọ, otu ugboro ugboro anọ n'afọ.
Companieslọ ọrụ ego ntanetị
Companieslọ ọrụ nwere ezigbo net nha bụ ụlọ ọrụ kacha aga nke ọma na ụwa.
Onyinye ego nke ụlọ ọrụ a na-akwụ mgbe niile bụ nrọ nke onye isi ọ bụla dị elu nke ụlọ ọrụ na onye itinye ego ọ bụla.
Nyocha nke ọrụ anyị na-enye gị ohere ịhọrọ ụlọ ọrụ nwere ezigbo ego sitere na ụlọ ọrụ ụwa niile ma were naanị ha dịka ndị na-achọ itinye ego.
Oge Azụmaahịa Ahịa
Oge ọnụahịa ahịa ụlọ ọrụ na-ebili na mgbanwe ngwaahịa bụ isi ihe na-egosi nkwụsi ike nke uru nke ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile ma gosipụta uru mgbe niile, yabụ ndị na-eketa ya na-abawanye oge niile.
Oge uto nke uru ụlọ ọrụ nwere ike ịdị iche. Ogologo oge a ka odi oke uru ụlọ ọrụ bara.
Ọrụ anyị na-eme ka o kwe omume ịhazi ndepụta nke ụlọ ọrụ dịka oge ọnụahịa na-abawanye: maka afọ atọ gara aga, site na afọ gara aga, maka ọnwa atọ gara aga, site na ọnwa gara aga, site na izu gara aga.
Ego oru ego, ego net
Ọrụ ego nke ụlọ ọrụ ahụ, dị ka ego ụtụ, bụ mkpokọta ego ụlọ ọrụ ahụ maka oge mkpesa akọwapụtara belata mmefu na ụtụ niile.
Ngosiputa ego sitere na “ego ego riri” na emetuta ego ndi ozo.
Ego netiti nke ụlọ ọrụ ahụ na-emetụtakwa uto n'ọdịnihu nke ọnụahịa ngwaahịa ụlọ ọrụ n'ahịa ahịa.
Ngosiputa ego nke ulo oru, ihe omuma
Ọrụ ego nke ụlọ ọrụ ahụ. Onu ogugu ha buru ibu bu ihe ego n’egosi na o gha eme ma gota ulo oru a.
Nchịkọta nke akụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ego na-enye uru nke òkè.
Dịka iwu, ngụkọta ọnụahịa otu ụlọ ọrụ nwere ike adabaghị na ngụkọta ọnụahịa nke akụrụngwa nke mgbanwe ngwaahịa.
Nrụ ọrụ ego, ego ha nwetara
Ọrụ ego. Onu-ahia ego nke ulo oru ahu bu ego nke anata na akaụntụ nke ulo oru maka oge akuko a choputara.
Ego nile nke ulo oru a bu ihe nghota kwesiri ntukwasi obi banyere ihe gha aba uru n ’ụlọ ọrụ a n’ime oge akụkọ na nke na-esote.
Na ọrụ ntanetị anyị nke ụlọ ọrụ ndị na-egosi fim maka mgbanwe ngwaahịa, ị nwere ike idozi ụlọ ọrụ site na ngosipụta “ego ụlọ ọrụ na-enweta”.
Isi okwu nke ụlọ ọrụ bụ nchikota nke uru nke ngwa ahịa mgbasa ozi niile.
Isi okwu nke ụlọ ọrụ ahụ bụ oke nke na-ekwu maka nnukwu ụlọ ọrụ ahụ. Nwere ike idozi ụlọ ọrụ ndị ahụ site na oke "ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ" oke.
Dị ka a na-achị, na ahịa mba ụwa, a na-ewere akara ngosipụta nke ụlọ ọrụ ụwa na dollar.
Ekekọrịta mkpụrụ - ego a na-enweta na ngalaba nke ọ bụla etinye ego na mpaghara ọ bụla, wee kpebie site na nha nke ụgwọ akwụrụ na òkè a.
Nkesa a na-ekenye ya, ya na mgbanwe na ọnụahịa nke ihe maka oge ịkọwapụta, bụ uru onye na-etinye ego tinye n'ọrụ na ụlọ ọrụ ga-enweta.
Mana ihe ngosipụta "mkpụrụ maka mkpụrụ" na - akwụkarị ike karịa ọnụahịa ngwaahịa. Maka itinye ego nke ogologo oge, ọ bụ kpomkwem nha ekere òkè bụ isi ụkpụrụ maka ndị sonyere n'ahịa aka itinye ego na ụlọ ọrụ.
Kewaa ego ugwo
Onu ogugu nke ugwo bu ihe ngosi nke ulo oru ahu nile ma choputa ego ole emefuru iji kwụọ ndi ulo oru a.
Onu ogugu nke ugwo bu ihe na - ato uto site na mkpokọta uru nke ulo oru na otu onu ahia.
Na ọrụ nkwado ngwaahịa anyị, ị nwere ike ịhọrọ usoro idozi site na ngosipụta “Chekwaa ụgwọ ego”.
Ego kwa otu - otu n’ime ihe na - egosi onye na - etinye ego n’ahịa aka.
Ego kwa otu - uru nke ụlọ ọrụ ahụ, kewara site na ọnụọgụ niile nke ụlọ ọrụ edepụtara na mgbanwe ngwaahịa.
Nwere ike idozi ndepụta nke ụlọ ọrụ ịchọrọ site na njirimara "ego ọ bụla òkè" iji hụ ụlọ ọrụ kachasị baa uru.